Hub badan ayaa la soo gudbiyey intii cafisku socdey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: Dan Segerson/SR
Hub badan ayaa la soo gudbiyey intii cafisku socdey
La daabacay onsdag 19 juni 2013 kl 13.35
Cafis ayaa horey loogu fidiyey ciddii iska soo dhiibta hub ay haystaan. Xilligii gu’ga oo u dhexeysey 1dii Maarso ilaa 31 Mey ee sannadkaan waxaa cafiskaas awgiis boliiska loo soo gudbiyey 15132 oo hub kala duwan ah iyo 36 tan oo rasaas ah.
Hubkaas la soo gudbiyey wuxuu ka koobnaa boqolkiiba 50 hubka wax lagu ugaarsado, boqolkiiba 30 hubka gacanta, inta kale oo ahayd boqolkiiba 20 waxay ka koobneyd hubka darandooriga u dhaca, qaybo hub iyo hubka neefta tuura.
Dhammaan hubkaas la soo gudbiyey waxaa loo diray Shaybaarka dembiyada si loogu sameeyo baaritaan dhab ah. Baaritaankaas waxaa looga gol leeyahay in lagu ogaado in hubkaasi uu ku qoran yahay diiwaanka guud ee boliiska. Kadibna hubkaas qaarkiis waxaa la geeyaa matxafyada, halka kuwa soo harayna la burburin doono.